အမျိုးသားတွေ ခန့်ညားတဲ့အခါ အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများမယှဉ်ပြိုင်နိုင်လောက်အောင် ခံ့ညားတောက်ပြောင်ပြီး ကြည်ညိုဖို့တောင် ကောင်းလောက်အောင်အထိ ချောမောကြပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ဒီလိုချောမောလှပတဲ့အမျိုးသားတွေမှာ အောက်ပါတူညီတဲ့အချက်လေးတွေရှိကြပါတယ်။ ချောမောလှပတဲ့ အမျိုးသားတွေမှာ ဘယ်လိုအချက်လေးတွေနဲ့ ပြည့်စုံကြပါသလဲ?
ကျွန်မတို့အားလုံးက ကျွန်မတို့ကောင်လေးတွေကို ကျွန်မတိုနဲ့ လိုက်ဖက်ပြီး ကောင်းမွန်တဲ့ ဟာသဉာဏ်လေးတွေရှိစေချင်ကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုကလည်း ၎င်းတို့ကောင်လေးရဲ့ ဟာသအပေါ်မှာ တန်ဖိုးထားပြီး အာရုံစိုက်ကြသူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟာသဉာဏ်ရှိပြီး ပျော်တတ်သော အမျိုးသားတွေဟာ အင်မတန်ခံ့ညားကြပြီး လူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အခက်အခဲတွေကြုံလာသောအခါ လွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းနိုင်သူတွေလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအမျိုးသားတွေကို အမျိုးသားအများစုကလည်း ရွေးချယ်ကြတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒီလိုအပြာရောင်မျက်လုံးတွေမှာ ဘုရားပေးတဲ့ဆုလာဘ်လို့ ပြောရမလား? ဆွဲဆောင်မှုတစ်မျိုးကို ရှိနေကြတာပါ။ ပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ လူတွေက မျက်လုံးကို ဂရုမစိုက်ကြဘူးလို့ ထင်ရပါတယ်။ သို့ပေမယ့် မျက်လုံးလေးက ထင်ထင်ရှားရှားလေးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ လူကို စစတွေ့တွေ့ချင်းမှာ မျက်လုံးလေးကို ကြည့်မိမှာပါပဲ။ လေ့လာမှုတွေအရ အပြာရောင်မျက်လုံးရှိတဲ့ အမျိုးသားတွေက အပြာရောင်မျက်လုံးပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးတွေကိုသာ ပိုပြီးနှစ်သက်ကြပါတယ်။ အပြာရောင်မျက်လုံးပိုင်ရှင်ဖြစ်ဖို့တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းက အပြာရောင်မျက်လုံးရှိတဲ့ မိဘနှစ်ပါးရှိရပါမယ်။ သို့မှသာ အနည်းဆုံးမိဘနှစ်ဦးစလုံးဆီက အပြာရောင်မျက်လုံးဗီဇတွေကို သယ်ဆောင်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လူတစ်ယောက်လှပဖို့ အသက်အရွယ်နဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ ထင်ပါသလား? ကျွန်မတော့ ထင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်မှာ အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ အသိဉာဏ်ရင့်ကျက်လာပြီး တည်ငြိမ်မှုတွေနဲ့ ချောမောလှပလာမြဲပါပဲ။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသားတွေကတော့ ချွင်းချက်ပိုပြီး ခံ့ညားကြပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေအများစုကလည်း ကလေးသာသာ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ ဂျစ်ကန်ကန် ကလန်ကဆန်အမျိုးသားတွေထက် ဒီလိုတည်ငြိမ်ပြီး ခံ့ညားအေးဆေးတဲ့အမျိုးသားတွေကို ပိုသဘောကျတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ အားကစားလုပ်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေကိုလည်း သဘောကျတတ်ကြပါသေးတယ်။
အမျိုးသားတွေရဲ့ ချောမောမှုစံသတ်မှတ်နှုန်းတွေမှာ အသံဩဇာကလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေအရ ယောင်္ကျားကောင်းတွေမှာ အသံဩဇာပြည့်ဝနေရမယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီအချက်က ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပိုင်းကို ဆိုလိုတာပါ။ အမျိုးသားဖြစ်တိုင်း အသံဩဇာတိက္ကမနဲ့ ပြည့်စုံနေရမယ်လို့ လိင်အမျိုးအစားခွဲခြားနေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အသံဩဇာပြည့်စုံသူတွေမှာ ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိတယ်ဆိုရုံလေးပါပဲ။
ရုပ်ရည်အလှတရားဟာ အမှန်တကယ်လိုအပ်ပေမယ့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကတော့ ၎င်းလူကို အကဲခတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ ပထမအရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာ ရုပ်ရည်ရူပကာကို အင်မတန်အာရုံစိုက်ပေမယ့် အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေကို ရုပ်ရည်ကို ထင်သလောက်မကြည့်ကြပါဘူး။ တစ်ဆက်တည်းမှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ဟာ ကူညီတတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အမျိုးသားတစ်ယောက် စိတ်ထားမြင့်မြတ်နေတဲ့အခါ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း အမြင်ကြည်ကြပြီး ၎င်းအမျိုးသားအတွက် အကျိုးစီးပွားတွေများစွာ တိုးပွားနိုင်ပါတယ် (ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကို ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်)။